जनताको जलविद्युत् त्रिशूलीले चैत ७ देखि आईपीओ निष्कासन गर्दै, प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ भुक्तानी गरे हुने
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:५२
कम्पनीले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरका ३७ लाख ५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।आईपीओ खरिदका लागि दरखास्तसहित प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । अन्य आईपीओमा आवेदनसँगै प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले चैत ७ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरका ३७ लाख ५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको जारीपुँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ ।
आईपीओ निष्कासन छिटोमा चैत १२ र ढिलोमा बैशाख ६ गते बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । आईपीओ खरिदका लागि दरखास्तसहित प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । अन्य आईपीओमा आवेदनसँगै प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । जनताको जलविद्युत् भएकाले पहिलो चरणमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्र ९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
न्यूनतम १०० देखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने ग्लोबल आईएमईले जनाएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २२ करोड २३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । निमार्ण अवधिको ब्याजबाहेक ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजना बनाउन ७ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिशूलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३० र नेपाल टेलिकमको ३० गरी ६० प्रतिशत संस्थापक स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । यस्तै सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत लगानी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
आईपीओ निष्कासनबाट प्राप्त हुने पुँजी आयोजनामा परामर्श सेवा, प्रशासनिक र सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको ३ दिनमा त्रिशूलीले आईपीओका लागि आह्वानपत्र प्रकाशित गरेको छ । बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका १९ मध्ये पहिलो चरणमा ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् कार्यान्वयनमा आएको हो । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको त्रिशूली ३ बी पहिलो आयोजना हुने भएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, मा परिमार्जन गरी जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी सुनिश्चित हुने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी अर्थात २ अर्ब ४७ करोड र ७० प्रतिशत ऋण ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।
आयोजनामा नबिल बैङ्कको अगुवाइमा गठन भएको सह–वित्तीयकरणमार्फत ऋण लगानी भएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी र बैङ्कहरुबीच २०७५ भदौ ४ गते ऋण सम्झौता भइसकेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम २०७७ फागनु २९ भित्र सक्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
४ लघुवित्तले १७ करोड ३६ लाखको आईपीओ ल्याउँदै
धितोपत्र बोर्डको प्रशिक्षण कार्यक्रम
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव, चुत्तापुँजी १ अर्ब पुग्ने
प्रभु बैङ्कको ५६ लाख कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत
सांसद अमनलाल मोदीले कुलमानसँग मागे ५ लाख घुस
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको नाफा घटाउने यी हुन ३ ऋणी, जसले ४४६ करोड तिरेनन
अमनलाल मोदीलाई कुलमानको झापड, ‘३ किमी तार तान्न नदिएर आफ्नै क्षेत्रमा विकास राेक्ने, सांसद भएर जे पनि बोल्न पाइन्छ?’
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चीन उड्ने, साउन पहिलो साता सम्झौता हुँदै
किसानको सरकारी अनुदानमा कर्मचारीको रजाइँ, तलब खर्च ५ अर्ब
१३ जलविद्युत् कम्पनीको ४६५ करोडको सेयर निष्कासन रोकियो, कुन आयोजनाको कति ?
बैङ्कलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरेर ब्याजदर सस्तो बनाउने बजेट आउनुपर्छ
अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता राजस्वभन्दा पनि औद्योगिक प्रवर्द्धनमा, आउला त उद्योगमैत्री बजेट ?
आठ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री हुँदै
सङ्घीय सरकारसँग स्थानीय तहका माग
त्रिवि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा नक्कली भारतीय रुपैयाँ बरामद, युनुस अन्सारीसहित ४ पक्राउ
भारतबाट आँप बोकेर आएको ट्रक त्रिशूलीमा खस्यो, चालक र सहचालक घाइते
कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि आएका भारतीय तीर्थयात्रीबाट आठ लाख राजस्व सङ्कलन
तेजपात भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रमा आगलागी, अढाई करोड क्षति
दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै छ चितवन, ४० प्रतिशतभन्दा बढी दूध जिल्ला बाहिर खपत
विदेशीले पाँच करोड भन्दा कम लगानी गर्न नपाउने
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा १० प्रतिशतको ‘ग्याप’